2019-04-25 11:07:54 ,(25.4.2019) ကျွန်မတို့ #Countr…
(25.4.2019) ကျွန်မတို့ #Country_Job_Agency တွင် ကုမ္ပဏီကြီးများမှ လက်ရှိလိုအပ်သော Position များကို
1. တာမွေမြို့နယ်ရှိ Phone Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Area_Sale_Manager M(3)Posts
– Salary 700000 ~ 800000 ks
– Chinese Basic/ English4skills/ MS Word/Excel
– Exp(5)yrs (Marketing Manager Field)
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Aye Aye San Ph; 09-451811412)
2. မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Chief_Account F(3)Posts
– Salary 700000~800000Ks
– ACCA/ CPA/ Computer ကျွမ်းကျင်
– Exp (5)yrs (Chief Account Field)
– Age (35)yrs
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Zin Mar Ph; 09-424323584)
3. ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Engineering Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sr. Qs_Engineer F(2)posts
– Auto CAD (2D,3D)
– Building Estimate ကျွမ်းကျင်စွာတွက်နိုင်ရမည်။
– Exp(3)yrs (Site Field)
– (30.4.19)ရက်အင်္ဂါနေ့တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Phoo Ngone Ph; 09-440544936)
4. ပုဇွန်တောင်မြို့နယ်ရှိ Printing Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Computer Excel ကျွမ်းကျင်
– Exp (2)yrs above (Cash Bookသွင်းနိုင်ရမည်။)
(2) #Office_staff F(5)Posts
– Salary 150000~200000Ks
– ဘွဲ့ရ/ Computer Basicရ
– အလုပ်ချိန် (73း0~43း0)
– (30.4.19)ရက် အင်္ဂါနေ့ နံနက် (10)နာရီတွင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)
5. ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်ရှိ Logistic Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Jr.Account F(3)posts
– ဘွဲ့ရ/ MS Word/ Excel
– Age (23~26)yrs
6. ယုဇနပလာဇာရှိ Furniture Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Leader F(3)Posts
– ဘွဲ့ရ/ Computer Basic
– တစ်ပတ်တစ်ရက်ပိတ်/ ယူနီဖောင်းရှိသည်။
– (26.4.19)ရက် သောကြာနေ့ နေ့လည် (2း00)တွင် အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw May Phoo Ngone Ph; 09-440544936)
7. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ FMCG Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Staff M(3) Posts
– Salary 150000+%+ Other Allowance
– အလုပ်ချိန် (8း00~43း0)
– နယ်သွားနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ယူနီဖောင်း/ ဖယ်ရီရှိသည်။ (ရွှေပြည်သာ/ အင်းစိန်/ သမိုင်း/ လှိုင်သာယာ)
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Lae Mon Ph; 09-445440153)
8. တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ မျက်နှာအလှပဆိုင်ရာ ဆေးခန်းတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #ဆေးခန်းအကူ F(5)Posts
– Nurse Aid Certificate ရှိသူ
– အလုပ်ချိန် (10း00~7း00)
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Htoo Thinzar Ph; 09-264446085)
9. လှိုင်သာယာမြို့နယ်ရှိ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Salary 150000~180000Ks
– စနေနေ့ဝက်/ တနင်္ဂနွေပိတ်သည်။
– ယူနီဖောင်း/ ဖယ်ရီရှိသည်။ (လှိုင်သာယာ/ အင်းစိန်)
(2) #Office_Staff M(5)Posts
– BSc(Chem),Bil Chem ဘွဲ့ရ
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Yu Yu Ph; 09-458315642)
10. လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ Plastic Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Salary 450000~500000Ks
– B.Com ဘွဲ့ရ
– LCCI Level (III)UK, Accounting Software သုံးနိုင်ရမည်။
– (25.4.19)ရက် ကြာသပတေးနေ့မှစ၍ တစ်ပါတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် U Nan Htike Aung Ph; 09-445440152)
11. မရမ်းကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကုမ္ပဏီကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Office Staff_F(3)Posts
– Computer (Myanmar&English Font)ကျွမ်းကျင်ရမည်။
– Age (30)yrs
12. လမ်းမတော်မြို့နယ်ရှိ ရုံးသုံးအ၀တ်အထည်ဆိုင်ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Boy M(3)posts
– အလုပ်ချိန် (73း0~6း00)
13. ကမာရွတ်မြို့နယ်ရှိ ကတ္တားကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Service_Staff M(5)posts
– 9တန်း အောင်/ 10တန်း/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– Exp မလို
– Age (21~28)yrs
14. မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်ရှိ ဘိလပ်မြေကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
(1) #Sale_Staff M/F(5)posts
15. အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ အိမ်ဆောက်ပစ္စည်းကုမ္ပဏီတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်
– Salary 230000~250000Ks
– LCCI Level (I,II), Computer Excel
– အလုပ်ချိန် (83း0~6း00)
(2) #အရောင်းစာရေးမ_ မ(10)ဦး
– 10 တန်း/ ကျောင်းကိစ္စကင်းရှင်း
– (27.4.19)ရက် စနေနေ့ နေ့လည် (1း00)နာရီတွင်အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ အချက်အလက်များ စိတ်ဝင်စားပါက CV တစ်စုံ/ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူ Country Job Company သို့လူကိုယ်တိုင် CV လာတင်နိုင်ပါသည်။ (ဆက်သွယ်ရန် Daw Thida Ph; 09-443207160)
– #Country_Job_Company_Limited ပန်းခြံတာဝါ၊ (၆)လွှာ၊အခန်း(၆၀၄) ဗားဂရာလမ်း၊ မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းမြို့နယ် မှာ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်လျှောက်ထားလို့ရပါတယ်။ (မြေနီကုန်း မှတ်တိုင်မှာဆင်းရမှာပါ)
ရုံးဖုန်းနံပါတ် 01 2306362 , 01 516639, 09-404779959 , 09-404777933 များသို့လဲ တနင်္လာနေ့ မှ စနေနေ့အထိ(စနေနေ့တစ်ဝက်)ရုံးဖွင့်ချိန် နံနက် ၉ နာရီမှ ညနေ ၅ နာရီအတွင်းစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
This entry was posted in Job Vacancy on 2019-04-25 by admin.
← 2019-04-25 11:04:54 ,KTK Electrical Engineering Com… 2019-04-25 11:32:51 ,NongHyup Finance Myanmar Co., … →